Fitohizan'ny hafatra : Re: Ho an'i Microscop
Miharena - 10/10/2017 18:43
Izay tsy manaiky ametrahan-tanana dia tsy ho sitrana akory satria efa manda ny Herin'Andriamanitra.
Ilay resaka cancer dia azonao atao tsara ny mijery ireny fijoroana vavolombelona be dia be ireny hoe nisy sitrana noho ny finoany fa Jesoa no Mpanasitrana.
Maro ireo dokotera no miteny amin'ny marary hoe tsy izy no manasitrana fa manampy fotsiny amin'ny fitsaboana izy fa Andriamanitra irery ihany no manasitrana.
Tsy eken;ny sain'i Rhaj0 mihitsy ireny resaka atsipy eto ireny fa laviny amin'ny foto-pisainany irery foroniny ao aminy ao ihany.
Manontany tena ihany aho hoe iza amintsika ity ary no mikombom-pisainana, fa ny hitako dia ilay mpametra fisainana ho an'ny tenany irery io no tena mikombona. Izaho milaza hoe jereo dia hadihadio ireo fijoroana vavolombelona fanasitranana dia tsy eken'ny fohy saina ny manadihady ireny.
rhaj0 - 10/10/2017 22:11
Ireo "mijoro ho vavolombelona" inoan-dry Miharena fa sitrana ny homamiadana ve, ilay toa an'i Tsaratsara mpanao belazao? Naratra ary nisy fery mivoaka nana be noho izay adin-dahalony tany ilery, dia lazainy fa "cancer" hono ilay fery. Mba hainao moa ry Miharena toatoa ny ahoana ny fisehon'ny sela voan'ny cancer? ngo dia ataonao fa toa ny ferin-dahalo??
Dia rehefa sitrana ny ferin-dahalo dia hosannah.. nolazainy fa i Atra mihintsy koa hono no nanasitrana ny cancer-ny (nefa ferin-dahalo ilay izy)... dia matahotra dia "mino" ao tokoany ry Miharena satria "niteny" an'izany hono i Tsaratsara.
raha hiteny koa ve i Tsaratsara hoe, "inty ny rononoko sotroy ry Miharena", satria izany hozy Andtrmna, dia ao koa ianao ve ry Miharena?? Dia giravy eee... giravy.
Miharena - 11/10/2017 17:17
Ilay resaka faniratsirana io moa dia angadinao mihitsy Rhaj0 fa mba anehoy tsy faniratsirana kely aloha raha manana fa tsy io bala tsy mandeha amin'ny laoniny io foana no asesinao rehefa tsy manan-kalahatra e!
rhaj0 - 12/10/2017 13:48
Ilay "maniratsira" ve midika hoe "se moquer"??
Raha izany dia ho ataoko foana indray ary tsy itsitsiako raha io.
"Bien sur qu'on peut se moquer (de la religion)" hozy ny praiministra Kebany aty.
Ny ataonareo sy Tsaratsara koa moa ka mihatra aman'ain'ny tsimanantsiny, ka dia mendrika ho anareo ny ho "tsiratsiraina" eee...
rhaj0 - 13/10/2017 16:14
rhaj0 raha hiteny koa ve i Tsaratsara hoe, "inty ny rononoko sotroy ry Miharena", satria izany hozy Andtrmna, dia ao koa ianao ve ry Miharena?? Dia giravy eee... giravy.
Miharena Ilay resaka faniratsirana io moa dia angadinao mihitsy...
efa nandalo teto anie ry Miharena ny youtube-n'ireo Kristiana nampinoan'ny Gourou-ny tao ampiangonana tao hoe, "hano ny bozaka fa tsara", hozy ny Baiboly sa Jesosy.
Dia nirongatra nivoaka ny fiangonana dia niroaka ahitra tokoany ny naman'i Miharena.
Ka ho angadiana ho anao koa ve ny bozaka ry Miharena aa??
endriny - 13/10/2017 16:30
I Jesosy mihintsy no maniratsira koa: tsiratsirainy ny reniny. Ny Ray aman-dReniny, ny havany, ny Sabata. Dia mbola misy mitohy hatrany ankehitriny fa feno Demonia sy Satana izay tsy manaiky ho Kristianina.
Ireo efa Kristianina indray maniratsira ny didy folo sy ny mpiaramonina ary ny baiboly, dia mody mifoha ao am-po dia afaka ny fahotany hono.
rhaj0 - 13/10/2017 19:26
Iverenako kely indray ny nanjo an'i Microscop.. fa dia raha ny fahazoako azy, dia
- noporetin'ireo Mpino izy hanaraka ny fombafomba izay TSY hita akoriny ny mahatsara azy, na marimarina koakoa, hita be ny maha-absurde/ridicule azy.
- natsangan'ireo Mpino ho fahavalo i Microscop rahefa tsy mety hanaraka ny dihin'ireto Mpino ireto, na rehefa manoro na manakiana ny ataony.
ilay atao sy inoan'ireto Mpino anefa dia ... tena absurde sy ridicule. Averiko kely indray ny resako teo, izay natodiko t@ Miharena, fa raha ny tena izy, dia mitodika @ ireo Mpinomino foana, izay manitsakitsaka ny bulle-n'ny hafa. Dia lazainy fa "manao soa' na "manasitrana" hono izy rahefa hoe "mametra-tanana" sy "manala devoly", nefa 'finoany" azy manokana, ao @ imazimation-n'irery ao, tsy voaporofo ary tsy mamokatra akoriny. "Pensées mazikan-jazakely" no amiravirana olona.
rhaj0 Raha voan'ny sery moa, dia satria efa mba "takatrao" Miiharena ihany ny fandehany, dia tsy anaovanao ilay "pensée magique"-n'ny fametrahan-tanana izany an... nefa anie "marary" ihany ny voan'ny sery eee...
endriny - 16/10/2017 17:01
Azo atao koa ny hoe mifindra monina, fa tsy voatery hiady aman'aina akory.
Raha fiarahamonina iray no tsy tia, Madagasikara mbola malalaka.
Miharena - 16/10/2017 20:44
Hoatry ny hafahafa ihany ilay adihevitra satria na Rhaj0 na Endriny dia miresaka an'i Jehovah sy Jesoa ihany nefa tsy manaiky fa IREO no Mpandrindra sy Mpampahalala ny fahamarinana ho an'ny olombelona.
Ka ny fanontaniana aloha izay tokony hovalianareo dia hoe misy sa tsy misy fa imazinasio ireo voambara ireo alohan'ny tokony hanohizana tsara ilay resaka hoe fanalana devoly sy ny sisa manaraka.
rhaj0 - 17/10/2017 15:07
Inona @ famaritana ny teny hoe Atheist no tsy mety takatry ny sainao ry Miharena??
Ndana ataovy ny devoaranao dia mba fantaro hoe inona ny Atheism aloha eee.. Tsy ao anaty Baiboly izany, fa mba ampiasao @ izay ny coco internet eee... Efa mandroso ho'a ny taona eee...Ary aza antenaina hitori-teny aminao ny @ Atheism aho ohatra, fa tsy fomban'ny eto ny mihevitra fa alitara ny serasera.
Miharena - 20/10/2017 08:07
Ny Ateista amin'ny maha-famaritana arak'olombelona no tiana lazaina. Marina fa ao anaty aterineto tokoa ilay izy fa hoatry ny miteny hoe rehefa teraka Rhaj0 dia mamorona firehan-kevitra hoe tsy dadako sy neniko no niteraka ahy.
Fehiny : atheism = firehan-kevitra arahana bontolo fa tsy mitombina.